UHomerun: Isitayela sobunye KDE | Kusuka kuLinux
U-Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Ukubukeka / Ukwenza ngezifiso, Aplicaciones, I-GNU / Linux
Yize ngingeyena umlandeli we UnityUma ngibona ukuthi inezinto eziningi engizithandayo futhi ngicabanga ukuthi i-interface yayo ilungele amadivayisi anesikrini esincishisiwe njenge-Netbooks.
Abaningi bazokwazi lokho KDE ingenziwa ngezifiso kuze kufike ezingeni lokuthi ibukeka kanjani Unity, kepha imininingwane ebalulekile ibingekho: Ama-Pitchers namaLens. Lokho wukuthi, leyo ndawo ekhonjiswayo futhi esivumela ukuthi sifune izinhlelo zokusebenza, amafayela nokunye, okukhombisa izithonjana ezithile ezinkulu.
Kulapha UHomerun, isiqalisi sesikrini esigcwele esinokuqukethwe okuhlelwe kumathebhu.
Ungabona iScreencast somunye wababhali ku-YouTube:
cunt UHomerun Singapheqa izinhlelo ezifakiwe bese siziqala noma sizingeze ohlwini lwezintandokazi ukuze sifinyelele kuzo ngokushesha ekhasini lasekhaya.
UHomerun ibala izindawo / amafolda wethu owathandayo futhi isivumela ukuthi sizulazule kuwo. Ukuchofoza entweni engxenyeni ethi "Izindawo Eziyintandokazi" kuzoba uhlu lokuqukethwe yile folda, ukuze sikwazi ukuzulazula kumafolda ukuvula idokhumenti ngaphandle kokusebenzisa umphathi wefayela.
Inguqulo 0.1.0 isiyatholakala nge ukulanda.kde.org. IGit Repository ise- amaphrojekthi.kde.org futhi kukhona ne I-PPA yabasebenzisi be Kubuntu.
Ukwaziswa okwengeziwe: I-KDE Userbase
Ikakhulu ngiyethemba ukuthi UHomerun woza ugcwalise isikhala osishiye kimi I-Kbook Netbook, okungukuthi, iseshini ye- KDE kulawa madivayisi, ngokombono wami, ukusebenza kuhle kabi.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukubukeka / Ukwenza ngezifiso » IHomerun: Isitayela sobunye i-KDE
ahhaha Chevere .. Noma ngicabanga ukuthi akekho umsebenzisi we-Kde ongathanda ukwenza lokhu.
Ngiyazi ukuthi kubukeka njengemandriva / rosa marathon
okuningi, kepha ngisale nemandriva
Angiyena umlandeli wobumbano, futhi angaphansi kwe-KDE, kepha ukuphela kwento engikukhumbulayo nge-Ubuntu yilokhu. Ngizobona uma ngiyivivinya kanye ne-KDE. Ngempela ngingu "Fedorian." Uhlelo lokusebenza oluhle.
Kuhle, ngethemba ukuthi inguqulo yeXfce izophuma kungekudala, ha ngiyadlala.
Manje njengoba ngicabanga ngakho, uHomerun ungikhumbuza uHomer Simpson kakhulu.
hehehehe, okufanayo engikushoyo, bekungakafiki kimi.
Ngakho-ke manje ubumbano buhle futhi buhle? Angikusho lokhu njengokugxeka umbhali wale ndatshana, ngikusho ngoba ngihlale ngisho ukuthi lapho ezinye izindawo zenza okwenziwe yiCanonical nge Unity khona-ke ubumbano luyoba luhle yize ngingacabangi ukuthi ngokombono wabasebenzisi kwamanye ama-distros kanye / noma izindawo bayemukela ukuthi Ubunye buhle. Noma kunjalo, ngivumelana no @Jlcmux ngokuthi "akacabangi ukuthi noma yimuphi umsebenzisi we-KDE angafuna ukwenza lokhu". Ngokuthile abasebenzisi be-GNOME bazoqhubeka nge-GNOME, kungaba yiShell noma iClassic (yize ngiqonde kakhulu kokudala). Kokuthize abasebenzisi be-MATE, iCinnamon noma izindawo ezahlukahlukene abasebenzisi bayo ngayinye yalezi zindawo, ngoba bayithanda kangcono, hhayi ngoba belindele ukubukeka njengobunye ngesikhathi esithile ... ngalokho basebenzisa Ubuntu futhi yilokho kuphela. Angazi…
hhayi ukuthi ubunye buhle futhi buhle. sezijwayele ubunye.
Ukuphakama kwangempela kwe-KDE ukuthi uma uthanda imenyu efana ne-Unity, kukuchofoza okukodwa nje. Uma uthanda isiqalisi semenyu yohlobo lwe-win7 noma i-xp, kukuchofoza okukodwa nje, uma uthanda okuthile okufana ne-gnome2, kungalungiswa ngendlela ofuna ngayo, uma uthanda ibha yohlobo lwe-macos, unayo nayo.
Izingxenye zalo akuzona monolithic.
Zama ukukwenza lokho nge-gnome-shell noma ubunye.
Angazi ukuthi kungani abantu becabanga ukuthi labo abakhetha i-kde kungenxa yokubukeka kwayo, lokho kungafinyelelwa ngezingqikithi, okungenziwa ((user == development)? Qhubeka: + = «cishe») oyikho unikezwe ukuwina!
rodolfo argello kusho
Ngokwami, ubumbano ekuqaleni angizange ngiluthande kodwa ngilusebenzisile futhi lunezinto zalo ezinhle, lubuntu obuningi ngithanda ukubukeka kwalo nezimpawu zalo nabanye engingakuthandi kakhulu ukusetshenziswa kwalo kwememori noma ukusebenza kwalo kubukeka kabi lapho kugijima kepha kuhle kakhulu, mhlawumbe uma bengancikile kugobolondo le-gnome kakhulu ngicabanga ukuthi kungaba ngcono. Kepha kuyindawo enhle.
Phendula i-rodolfo argello
UHomerun usevele ungene esikhundleni sePlasma Netbook lapha. Kungcono.
Ngiyayithanda !! Kade ngiyisebenzisa isikhashana. Ngiyisebenzisa njengesizinda, ngishiya isithombe-skrini
Hawu !! Kuhle. Kuziphatha kanjani? Kunjani ukusetshenziswa nokunye?
Angiboni mehluko omkhulu kunokwenye iziqalisi zohlelo maqondana nokusetshenziswa kwemithombo futhi izinzile impela.
Futhi kwimenyu yamathuluzi sebenzisa iwindows menubar (kdeplasma-applets-menubar)
Umbuzo wokugcina, ngabe lowo Kubuntu noma i-Arch? XDD
Ngiyazi ukuthi ngiyacasula hahaha, kepha "umphathi wenqwaba" onophawu lwe-chakra uvela lapho i-xD, ngendlela vicky, ngithande "umugqa omnyama" ohamba ngomugqa wokuzula we-dolhpin, ukwenze kanjani lokho? 🙂
x11tete11x leyo inketho yeBespin. Kuku-Workaround of the Bespin Configure
Ngendlela, uyibeke kanjani imenyu yamathuluzi kuphaneli?
U-Elav: kulokhu engikubona kusikrini, bekungenziwa ngezindlela ezi-2:
1) ngeBespin's Xbar
2) ne-plasma-widget-menubar (i-Canonical appmenu)
Bheka i-plasmoid ebizwa nge- "Window Menubar" (uma usho isithombe-skrini sika- @ vicky).
Sawubona, angikufundanga okuthunyelwe, ngifuna ukubona ukuthi yini evela ku-ejenti yomsebenzisi xD
Ngokwethembeka, kubonakala kimi njenge-dope, icishe ifane nomsebenzi we-KDE "find and run" owenziwe ngokwenza ngokuchofoza okungu-2 xD
Kuhle kakhulu, kepha kuthatha inqama eningi ngaphambili.
Yize i-KDE inokucushwa okukhethekile kwama-netbook, iqiniso lishiya kungathandeki, hhayi kuphela ekusebenzeni kepha futhi nokuthi kunzima ukulisebenzisa (ngilisebenzise izinyanga ezi-3 kwi-laptop ebengiyilahlile) ngaphandle kokuthi likhulule kakhulu. Kukhona futhi uhlobo lwamathebulethi, olungcono kakhulu kepha angikwazi ukuyifaka kudeskithophu noma kwi-laptop ye-PC ngaphandle kwezinkinga ezithile.
Lesi "siqalisi" uma senzelwe ukwenziwa kwesikrini futhi ikakhulukazi kuma-netbook ngaphandle kwalokho kwi-PC yedeskithophu sibukeka sisihle. Angiyena umlandeli wobumbano kepha iqiniso ngezikrini ezincane, lesi "siqalisi" sibeka enye into kule ndawo.
Ngizoyihlola kwi-netbook engizosusa kuyo amawindi bese ngifaka i-KDE ne-HomeRUN ukuze ikwazi ukuyihlaziya.
Iqiniso. Ngangijabule ukusebenzisa iseshini yeNetbook kwi-HP Mini emsebenzini, kepha hheyi, iseshini ejwayelekile isebenza kangcono.
Bangenza ngiwele esilingweni sokuzama i-KDE, ngoba ngingumsebenzisi we-Gnome-Xfce, bangenza ngiwele esilingweni. Futhi ngaphezu kwedeski laseJalimane, selivele linginikeza umbono wokuthi liyidesika… «elihle» kakhulu.
Sengizokuzama Thanks !!!
Ngabe iMicrosoft iyasebenzisana neLinux ???